देश परदेश : उत्तर कोरियाका ‘भुताहा डुंगा’ - Naya Patrika
देश परदेश : उत्तर कोरियाका ‘भुताहा डुंगा’
देश परदेश : उत्तर कोरियाका ‘भुताहा डुंगा’ – उत्तर कोरियाबाट जापानी समुद्री तटसम्म पुग्ने डुंगालाई ‘भुताहा डुंगा’ यसकारण भनिँदै छ कि यीमध्ये अधिकांश डुंगा कि त खाली जापानी तटमा पुग्ने गरेका छन्, कि त तिनमा लास हुने गरेका छन् ।
उत्तर कोरिया अब आफ्नो क्षेप्यास्त्र परीक्षणका कारण होइन, केही डुंगाहरूका कारण चर्चामा छ । बितेका दिनमा उत्तर कोरियाबाट केही दर्जन डुंगाहरू बगेर जापानी समुद्री किनारमा पुगिरहेका छन् । यी डुंगालाई ‘भुताहा डुंगा’ यसकारण भनिँदै छ कि यीमध्ये अधिकांश डुंगा कि त खाली जापानी तटमा पुग्ने गरेका छन् कि त तिनमा लास हुने गरेका छन् ।
यद्यपि, कैयौँपटक यी डुंगामा जीवित नाबिक पनि सवार भएका भेटिएका छन् । नोभेम्बरमा युरिहोन्जो मरिना तटमा पुगेको एक डुंगामा आठ मानिस सवार थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, उनीहरू उत्तर कोरियाली माझी हुन् । र, समुद्री कठिनाइले उनीहरूलाई यहाँसम्म पु¥याइदिएका हुन् ।
स्थानीय मिडियाको भनाइमाथि विश्वास गर्ने हो भने यी माछा समात्ने डुंगा हुन्, जो अवैध रूपमा जापान प्रवेश गरिरहेका थिए । तर, जापान र उत्तर कोरियाबीचको दूरी निकै लामो छ । विशेषज्ञहरूको भनाइमाथि विश्वास गर्ने हो भने उत्तर कोरियाका यी डुंगा यति टाढासम्म पुग्नुको मुख्य कारण उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता हुन् । विशेषज्ञहरूको भनाइ छ कि उत्तर कोरियाली सरकारले यी डुंगाका माध्यमबाट माझीहरूमाथि बढीभन्दा बढी माछा समात्न दबाब दिइरहेको छ ।
यस्तो मान्ने गरिएको छ कि वैश्विक प्रतिबन्धका कारण उत्तर कोरियामा खाद्यान्न र विदेशी मुद्रामा कमी आइरहेको छ । यसैकारण उत्तर कोरियाली माझीहरू खराबभन्दा खराब अवस्थामा पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर माछा समात्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यस वर्षको नोभेम्बर महिनामा पछिल्लो सातको तुलनामा पाँच गुणा बढी डुंगा जापानी किनारामा पुगेका छन् ।
के यो जासुसीको प्रयास हो ?
यस्तो आशंका पनि जनाइँदै छ कि जापानी तटमा पुग्ने यस्ता अधिकांश डुंगामा जीवितै रहेका मानिस उत्तर कोरियाबाट भागेर आएका मानिस पनि हुन सक्छन् । तर, यस्ता मानिसलाई पुनः उत्तर कोरिया नै फिर्ता पठाउने बताइएको छ । यसका साथै, दक्षिण कोरियाको साटो जापानसम्मको यात्रा बढी नै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यद्यपि यी मानिस जासुस हुन् कि भन्ने आशंका त्यति धेरै बलियो लाग्दैन । केही डुंगामा मात्र नाबिकलाई जीवित पाइएको छ, अधिकांश डुंगा या त खाली छन्, या तिनमा लास मात्र भेटिएका छन् ।
आखिर किन यति धेरै जोखिम उठाइन्छ ?
उत्तर कोरियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण उत्तर कोरियाली सरकारमाथि खेतीपाती तथा खाद्य सामग्री बढाउने दबाब छ । जापानी मिडियाका अनुसार उत्तर कोरियाली शासकले नाबिकहरूसित बढीभन्दा बढी माछा समात्न दबाब दिइरहेको छ । यथार्थमा उत्तर कोरियाले गत वर्ष आफ्नो सिमानामा पर्ने समुद्री क्षेत्र चीनलाई बिक्री गरिदिएको थियो । यस्तोमा यो सम्भव छ कि माझीहरू स्थान कम भएका कारण बढीभन्दा बढी लाभ उठाउन टाढाटाढासम्म माछा समात्दै यो जोखिम उठाइरहेका छन् ।